Taphni viidiyoo dandeettii dafanii waabarachuu nama gonfachiisa - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Bashannana Taphni viidiyoo dandeettii dafanii waabarachuu nama gonfachiisa
Tapha viidiyoo (action video game) taphachuun muuxxannoo taphichaa horachuu qofa irratti akka hindaangofne qorannoon mul’ise. Tapha viidiyoo taphachuun wolumaagalatti dandeetti dafanii waa barachuus akka nama kessatti uumu qorannoon bira gayame.
Akka Daafnee Baaveliir, profeessara qorasammuu, jettutti namoonni tapha viidiyoo taphatan waa heddu hojjachuudhaan caaloodha. Kunis kan ta’uuf waan amala waa barachuu fi qayyabachuu guddaa qabaniif. Tapha viidiyoo (action) baay’ee saffisaa ta’e yeroo heddu taphachuun isaanii akka namoota kanneen biroo irra dafanii waabaratan isan taasiseera, jetti Daafnee Baaverliir.
Akka qorannoo kitaaba Proceedings of the National Academy of Sciences irratti maxxanfametti, Daafnee fi gareen isii namoota viidiyoo taphatanii fi kanneen hintaphanne wolbira yoo qaban, garaagarummaa dandeettii saffisaan wabarachuu guddaa jidduu isaaniitti arguu danda’aniiru. Kanneen tapha viidiyoo hintaphanne, isaan taphatanii gadi kan waan itti kenname raawwatan.
Kennaadhumaan moo dhugatti tapaha viidiyootu addaaddummaa kana namoota jiddutti uume isa jedhu qajeelatti baruuf leenjiin namootaaf kennamee ture. Bu’aan leenjii kanaa akka ifatti calaqqisiisetti, namoonni dura tapha viidiyoo (gosa action) hintapahnne torbee 9 erga taphatanii booda garaagarummaa guddaa gama waa hubachuutiin agrasiisanii jiru.
Tapha viidiyoo taphachuun dafanii yaaduu fi saffisaan waa baruuf nama dandessisa. Waan hunda itti dhiisanii, garuu, tapha viidiyoo qofa jireenya godhachuun jireenya akka hintaanes qajeelatti hubachuun barbachisaadha.
Previous articleLammiiwwan Eertiraa 6,200 guyyaa 37 keessatti gara Itoophiyaa ce’an
Next articleRaajii samiifi ardii madaala kanaan ilaalaa